Nefteyugansk wesifunda bekulokhu idume ngobuhle bayo, eziningi amahlathi acwebile ne crystal amachibi ecacile. Yini eyingqayizivele kule ndawo? On lokhu kamuva.
I ukuzilibazisa isikhungo "Parus" (Surgut)
Phakathi ubuhle bemvelo Nefteyugansk kuyinto eziyinkimbinkimbi okusenza izinhliziyo izivakashi kusukela imizuzwana yokuqala ukuhlala. Thola indlela eya kuso ulula. Udinga ukuya emgwaqweni omkhulu, okuyinto uxhuma Nefteyugansk futhi Surgut. Mayelana indlela isigamu ngokusebenzisa kuyoba inkomba isiqondiso, ukuvula okuyinto ungakwazi ukufinyelela kalula eziyinkimbinkimbi.
Centre "Parus" (Surgut) ivuliwe nsuku zonke. Lapha ungakwazi uhlale isikhathi eside e Cottages izindlu iholide. Bakuhlonyiselwe ukuze ngamunye wazizwa ethokomele futhi zikhululekile. Kulesi sakhiwo ngenye yezinkampani ezingcono kakhulu efana nayo. ingqalasizinda athuthukisiwe futhi ezihlukahlukene amasevisi onganelisa izifiso zonke izivakashi, kungakhathaliseki ubudala noma izithakazelo. Into yokuqala okumele uqaphele - e isikhungo zoo. Kukhona amabhere, ngubani bacelwa ukuba cute ushukela cubes kusukela abedlula ngendlela, kanye nezinye izakhamuzi eziningi kokubili amahlathi ethu isiRashiya, futhi amazwe kusuka kwamanye amazwe. Uzobona Pumas, izingwe, izimpisi, izimpungushe ngisho Ikamela elikhulu okuthiwa Mahmoud. Abasebenzi kahle anakekele ezigcemeni zabo, ngakho ihlale bejabule futhi enobungane. Kumele kuqashelwe ukuthi lezi zilwane avunyelwe ngesandla okuphakelayo - ikakhulukazi izivakashi abasha bayokwazisa epaki omangalisayo. Lokho bonke namasevisi anganikeza ukuzilibazisa isikhungo "Parus" (Surgut).
Kukhona yomncintiswano enhle, lapho abafundisi wazibonela uyonifundisa futhi izingane zakho namaqhinga ihhashi ogibele. Ezinganeni kukhona amaponi, futhi kulabo abafuna umuzwa ongavamile ngaphezulu, anganikeza for a ride enhle livundle ikamela. Ukuze ezinequngo ukuzilibazisa isikhungo "Parus" (Surgut) inikeza nohlelo olukhethekile, baqeqeshiwe ukusingatha izinhlobo eziningi nezibhamu. Ungavakashela wahlomisa ngokukhethekile sokudubula amabanga, lapho kungenzeka ukudubula kokubhekiselwe evamile, futhi Frisbees.
Ngokukhethekile ikhokhelwa ukufuna ekhishini lejabulisa ukwehlukana kwayo. Kunezinhlobo eziningana masimu endlini futhi ongaphandle lokuphekiwe ensimini isizinda. Ikakhulukazi ezilingayo ubukeka ematendeni ezikhanya echibini, okuyigama futhi uphumule komthunzi walo. Abapheki ku "Sail" esihle ukupheka noma iyiphi izitsha inyama. Oweta ukuletha ngesicelo kwasekuseni, kwasemini noma dinner phezu ithala ehlobo noma ikamelo endlini.
I ukuzilibazisa isikhungo "Parus" (Surgut) It unikeza ezihlukahlukene zokuzijabulisa kokubili ehlobo nasebusika. Ngakho, ebusika ungakwazi ukukhwela snowmobile, Ukushushuluza ngisho iqhwa, "banana". njalo rink evulekile for bemizimba. Ngemva kokuhlala e okungcono abandayo ukuya sauna, Ukhuphula izinkungu ephulukisa ezokwenza dingisa izinsalela abandayo.
Kepha esikhathini ehlobo, ezihlukahlukene imisebenzi yokuzilibazisa abakwazi kodwa jabulani. Uhlelo ukuzijabulisa kuhlanganisa travel nge ukuhlala ubusuku i etendeni ezivulekile, ngesikebhe noma isikebhe, isikwele ngebhayisikili imikhondo ekhethekile.
Anemishini zemidlalo is ekahle zonke izinhlobo imidlalo ongaphandle, eziqala football futhi kokuqeda nge ithenisi, futhi crystal nasemanzini e namachibi kuphole ngisho izinsuku ezishisayo kwesizini.
Futhi lokhu akuyona incazelo ephelele ukuthi banganikeza ukuzilibazisa isikhungo "Parus" (Surgut). indawo eziyinkimbinkimbi iqukethe wonke kunesidingo ilwazi kanye nemininingwane yokuxhumana. umphathi lokuxhumana, ungakwazi ukuthola ulwazi mayelana zonke izinkonzo, indawo yokuhlala kanye izindleko ukuhlala. consultant Online kuzokusiza ukhetha uhlelo engcono lokuphumula.
Red Lake - umdlalo esekelwe SCP-354 luhlobo